Arturo Sánchez Sanz. Kubvunzana nemunyori weBelisarius: Magister militum yeEastern Roman Empire | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Bvunzo, Hurukuro, Vanyori, dzakawanda
Mufananidzo: Arturo Sánchez Sanz. Facebook.
Arturo Sanchez Sanz Iye chiremba mune Yakare Nhoroondo uye yake kosi mune yehunyanzvi nyika uye semunhu anodzidzisa rondedzero munyori akafara seakakura sezvakakosha. Basa rake razvino, Belisarius: Magister militum yeEastern Roman Empire. Muizvi indavhiyu inotiudza nezvazvo uye inotipawo a tenzi kirasi nezve genre iri zvakanyanyisa kudyiwa nevaverengi. Kutenda kuzhinji yenguva yako uye mutsa.
Arturo Sánchez Sanz. Kubvunzurudza
LITERATURE NEWS: Chiremba mune Nhoroondo uye Archaeology kuComplutense University, yako yekupedzisira yakaburitswa rondedzero iri Belisarius: Magister militum yeEastern Roman Empire. Chii chauri kutaura nezvacho mazviri?
ARTURO SANCHEZ SANZ: Iyo yekushambadzira nyika izere nezvakaitika zvinyorwa zvakapihwa kune iwo iwo iwo misoro kasingaperi uye zvakare, uye muSpain ichi chokwadi chakanyanya kusimba. Cleopatra, Kesari, maTercios, Auschwitz ... ndosaka, kubvira rondedzero yangu yekutanga takaedza kupa chimwe chinhu, chimwe chitsva uye chakasiyana. Anglo-Saxon zvinyorwa zvine zvikanganiso zvishoma mune izvi, asi muchiSpanish pane mashoma ezvinyorwa zvakapihwa kune mimwe misoro, kunyange ichizivikanwawo. Saizvozvo, vezvakaitika kare ivo vanowanzo tarisa kune yakavharwa nyika yekudzidza. Hurongwa hwazvino hwedzidzo yepamusoro hunotimanikidza kunyora chete zvinyorwa nezvinyorwa zvine hunyanzvi zvekuti hapana mumwe kunze kwevatinoshanda navo anogona kugaya.
Kuzivisa kwenhoroondo kunofinhwa pamusoro, ndosaka tichigara tiine mabasa mamwechete pamusika, kazhinji zvakanyorwa nevatori venhau, magweta, nezvimwe. vanozadza kushayikwa kwavo nekunyengera kwavo kwenhoroondo, asi havazi vanyori venhoroondo kana vezvinocherwa mumatongo, uye kwete kazhinji pfungwa inopfuudzwa kuruzhinji haina kunaka kana kushata.
Ndinotenda kuti basa redu, uye zvakanyanya, Basa redu sevanyori venhau dzakaitika ndere kutaura nezve Nhoroondo kwete chete mundima yezvidzidzo, asi yepasirese, kuti iite padhuze, nyore uye ivepo. Muhupenyu hwangu hwese ndakasangana nevanhu vashoma, avo, kunyangwe vachizvipira kune ese marudzi emabasa, vasingade Nhoroondo, uye pakupedzisira izvo zvavanodzidza hazvibve kune vakadzidza vezvakaitika kare, vanokwanisa kuitisa tsvakiridzo yemashure, uye izvo zvinogadzira maparagiramu asiri iwo. pane dzakasiyana misoro.
Nechikonzero ichocho ndakafunga zvakare kunyora kuzivisa kunyangwe pandakazofanira kushambira ndichipesana nezvazvino, nepfungwa yekuputsa iwo manyepo enhema akagadzirwa kubva pamabasa asinganetsi kana asina kunyorwa, ekupa rondedzero dzakakumikidzwa kuzvinhu zvidiki zvinozivikanwa kana kusamborapwa muCastilian, uye izvi zvanga zviri izvo kubva mavambo.
Ndakakumikidza bhuku rangu rekutanga kuna Philip II weMasedhonia (2013), chaizvo nekuti chimiro chake chagara chakafukidzwa nemwanakomana wake, Alexander Mukuru, uye kukosha kwaaive nako munhoroondo kunowanzo kanganwika. Muchokwadi, ndinogara ndichitaura kuti pasina Firipi paisazove naAlexander. Izvo zvakaitikawo rondedzero yangu yekutanga Yenzvimbo yeMabhuku, yakatsaurirwa kune vatongi (2017).
Chimiro cheiyi ngano yeuto reRoma muviri wakagara wakasviba uye wakashata, kunyanya pakufa kwemadzimambo ane hukama navo, asi hapana chimwe chinowedzera. Mauto akakunda mamwe madzimambo akawanda kupfuura vaMuzinda waMambo, uye kunyangwe muzviitiko izvi, kurangana kwavakaita kwaingozivikanwa kune vashoma vemitezo yavo zvichienzaniswa nezviuru zvemasoja aibva kuPraetoria aishanda muumambo. Kushora muviri wese nekuda kweizvi zvingaite sekushora nzvimbo yese yemapurisa nezviito zvevashoma.
Iyi ndiyo mimwe mienzaniso, uye maererano ne Belisarius chimwe chinhu chakafanana chinoitika. Havasi vanhu vazhinji vanoziva chimiro chake, uye vazhinji veavo vanozviita kazhinji nguva dzose kuburikidza neinovhiya iyo iyo huru Robert Graves akatisiya. Isu taida kubata nehupenyu hwake chaihwo, kurwa kwake, hunyengeri padare reByzantine, nezvimwe. mhiri kweruzivo, uye hapana akange anyora nezvazvo kare muSpanish. Ndiyo pfungwa huru inogara ichitifambisa, kuenda kumberi uye kuti tinotarisira kuenderera nemabasa anotevera andichangopedza uye andisati ndichizoburitsa.
AL: Sei uchinyora zvinyorwa uye zvisiri zvekufungidzira (zvakadaro)?
ASS: Muchikamu zvine chekuita nekudzidziswa kwatinowana sevanyori venhoroondo. Isu tinodzidziswa kubva panguva yekutanga yekuferefeta nechinangwa chekuwedzera ruzivo rwese, kwete kunyora bhuku, kunyangwe rondedzero inodzidzisa sezvandakambotaura. Mutauro watinofanira kushandisa wakanyanya kuvharidzira veruzhinji, wakanyanya, hatidzidze kunyora, asi kubvunza nezve zvakapfuura, uye izvo zvinogadzira zvikanganiso zvakawanda zvinomuka kana uchinyora iro basa.
Simba rakawanda rinoiswa pazvinhu zvisimo muruzivo, seyakakosha midziyo, iro bhuku rebhaibheri, nezvimwewo, asi hapana munhu anotidzidzisa kunyora nenzira inonetsekana, yakapusa, kugadzira mavara, kusagadzikana, kana kutogadzira plot, izvozvi hazvidiwe. Saka Ini ndinofunga kuti kunyora bhuku, ingangoita yakanaka novel, kwakanyanya kuomarara pane kunyora rondedzero, uye zvinoda kudzidza, kugadzirira, uye rumwe ruzivo rwandinotarisira kuwana nekufamba kwenguva. Vashoma vanyori vezvakaitika kare vanonyora zvinyorwa, uye kwatiri isu ndinofunga kuti chimwe chinhuzve chinotarisirwa kwatiri kana isu tichiedza. Ndiyo basa rakakura uye nekuda kwechikonzero ichocho ini ndinofunga kuti zvakakosha kuzviita nemazvo.
Nechikonzero ichocho ndiri kuzvigadzirira, uye ini ndatotanga nepfungwa yekuti ndanga ndichikurisa kwenguva yakareba, asi achiri mangwanani. Ndiri kuda kupa nyaya isina kunyorwa chete zvakanaka, asi yakanyorwa, saka kuti hazvidiwe kuti titange nezve zvatinoziva kuti zvakaitika, asi chete kuzadza izvo "maburi" anogara aripo munhoroondo. Vazhinji vatambi vakatipa chaizvo zvisinganzwisisike nyaya zvekuti chero munhu anoziva, asi isu hatina ruzivo rwakawanda pamusoro pavo. Izvo zvinokwanisika kuivaka zvakare kuti ipe iyo kuruzhinji pasina kukosha kwekugadzira nyaya dzekunyepedzera, kunyange zvichingove zvakakodzera. Ini ndinofungidzira kuti semunyori wenhoroondo itsika yakasikwa, asi ini ndinofunga ndiyo imwe nzira yekuratidzira nhoroondo nenzira yechokwadi uye inokwezva yeruzhinji.
AL: Semuverengi, unoyeuka here iro bhuku rawakaverenga rimwe zuva uye rakanyanya kukumaka?
ASS: Ndinozvirangarira chaizvo, uye zvine chekuita nezvatiri kutaura nezvazvo, uye pamwe ndosaka ndichizviona semunhu anofarira zvemunyori wazvo. Iyo inhoroondo yenhau yakatsaurirwa kumaAmazon engano na Steven pressfield (MaAmazon ekupedzisira, 2003). Maitiro ake ekurapa nhoroondo, kunyangwe ngano sezvazviri mune izvi, yakandibata zvakanyanya zvekuti ndakatanga kudzidza nhoroondo, kunyangwe nyaya yenyaya yangu yechiremba ndeye maAmazon, asi kwete izvo chete, asi zvakanyanya kuyemura kwangu kwakadzama kwechikadzi. Hushingi hwake, kusimba, kushinga uye hukuru nguva dzose zvinodzoserwa kubva kumavambo eNhoroondo.
Nechikonzero ichi ini ndaida kuunza zviyo zvangu zvejecha, chaizvo kurapa iwo chaiwo mufananidzo wengano nhamba vane ndangariro dzakashatiswa zvakanyanya mukubatana kwekufungidzira asi vane simba rakazvichengeta zviri zvipenyu kwezviuru zvemakore kubvira nyaya dzavo dzatanga. Muchokwadi, chaizvo nekuda kwezvatakambotaura, kunyangwe kubva kune yekudzidzira nyika dzimwe nguva Nyaya dzakadai dzakashandiswa nenzira yekudyidzana nekuda kwekukwira kwezvidzidzo zvevakadzi, kunyange kutosvika pakupa zvinyorwa zvinofungidzirwa kuti zvedzidzo asi izvo zvine dhata rakashandisirwa kuvashandura kuva mavara chaiwo ivo vasati vambove.
Ndiyo imwe yehondo dzekereke dzandinotenda dzatinofanira kubhadhara sevanyori venhoroondo, kunyangwe dzimwe nguva pamberi pevamwe vedu kana zvido zvavo zvichikanganisa chokwadi cheNhoroondo nemavara makuru. Uye izvo zvakakosha nekuti ini ndinotenda kuti mufananidzo wenhema unogadzirwa mune ruzhinji ruzhinji rwatinofanirwa kupa shanduko.
Mamwe mabasa mazhinji akandiisa mucherechedzo kunyanya, kusanganisira mamwe ese akanyorwa nePressfield, kana posteguillo, iyo yandinotenda chaizvo ivo vabudirira nekuti ivo havana kudikanwa kuti vagadzire chero chinhu kunze kwemashoko kuti izvo zvekutanga zvinyorwa hazvina kutisiya kana kurasika pane chaicho nyaya, izvo zvoga zvatova zvinopfuura kupenga.
Dambudziko revanyori vezvakaitika kare nderekuti isu tinoziva kwazvo kukosha kwekuzvinyora mushe kuti tibate nechero chidzidzo, uye nekuda kwechikonzero ichocho handina kuwana nguva yemakore yekungopedza mineti ndichiverenga nekuda kwekunakidzwa kwekuita saizvozvo. Ndine chaiwo mazana emabhuku akamirira yemukana, wandinovimba kukupa munguva pfupi iri kutevera.
AL: Munyori anotungamira? Uye munyori wezvinyorwa? Iwe unogona kusarudza inopfuura imwe uye kubva kune ese eras.
ASS: Thucydides yave pachayo yakakodzera iyo baba vehurukuro yakaoma kwazvo yenhoroondo, kunyanya panguva iyo iyo tsika yaivepo yaive ichiri epic kana, mune chero mamiriro ezvinhu, nyaya dzinenge dzisina chokwadi uye dzinotsoropodza. Akanga ari muAtene, uye kwete chero munhu, asi haana kuita hanya nekubvuma zvikanganiso zvevanhu vake mukutanga zvisina basa hondo kana kuita hutsinye pasina chikonzero.
Zvichida nekuda kweangu ega hunyanzvi munhoroondo dzekare handikwanise kutadza kutaura vamwe baba vezvino vanyora zvakanyanya mhando, yake Homer, iyo yakaisa hwaro hwenhema yekunyepedzera ngano ingangoita zviuru zvitatu zvemakore apfuura. Kubva kwavari pave paine akawanda akajairika manhamba akagadzira ese ari maviri marudzi kune akakurisa se Shakespeare, Dante, Cervantes, Poe, Tolstoy... uye vamwe vandinonzwa kuyemurwa kwakanyanya senge kwake Verne.
AL: Ndeupi munhu wenhoroondo iwe waungade kusangana naye?
ASS: Mubvunzo wakaoma. Zvakaoma kwazvo, sezvo paine akawanda. Ini ndaigona kutumidza zita rekuti spartan gamba Leonidas, kungano Alejandro kana zvinoshamisa Hannibal Barca, Kesari, Cleopatra, Akhenaten, Muhammad kana Mambokadzi Boudica. Kunyangwe pane dzimwe nguva apo cid oa Columbus, kunyangwe munguva pfupi yapfuura kusvika Gandhi.
Ndinoshuva dai ndakanga ndasangana ne AmazonDai vanga vari vechokwadi Nekudaro, dai ndaigona chete kusarudza imwe, ndinofunga zvaizove Jesu weNazareta, kunyanya kune zvese izvo zvaireva kwete kwete munguva yake chete, asi muHistory of Humanity, kuziva munhu anopfuura ngano, semunyori wenhoroondo. Muchokwadi, iye munhu anofamba-famba achigara akasarudzika padivi pevanyori vezvakaitika kare nekuda kwenyaya dzese dzakazonyorwa nezve hupenyu hwake, asi pasina mubvunzo aive mumwe weakakurumbira munhoroondo nezvose zvazvinoreva.
AL: Chero yakakosha mania kana tsika kana zvasvika pakunyora kana kuverenga?
ASS: Kwete chaizvo. Misoro yekunyora inomuka zvoga uye nyaya yacho yatovapo, kumirira mumwe munhu kuti aiendese kuvanhu nenzira yakanakisa. Ini ndinofungidzira kuti nemanovelisi akasiyana, nekuti iwo anoda kuwanda kwekugadzirira, kujekesa uye basa, saka zvakajairika kuti vanyori vasangane nemhando dzetsika idzi, sezvo vachida rubatsiro rwemasesi uye kurudziro iyo dzimwe nguva inongowanikwa mamiriro chaiwo. Kusvika zvino Ndiri kungoda mabhuku uye nzvimbo yakanyarara kunyora, asi kana nguva yasvika yekukwakuka, ndiani anoziva?
ASS: Ini ndinofunga chinonyanya kukosha chikamu chekunyora rondedzero ndiyo kutsvagurudza kwepamberi izvo zvinodikanwa kutarisana kuti titaure pamusoro penyaya neruzivo rwechokwadi. Muchokwadi, ini ndinofunga zvakafanira kushandisa nguva yakawanda pazviri pane kunyorwa kwekupedzisira kwechinyorwa icho chakatarirwa kupa. Zvikasadaro, tinogona kushambadza risina kukwana, risiri iro basa iro chero munhu ane ruzivo angarambe nechivimbo, uye zvakafanira kuyedza kunzvenga mamiriro akadaro.
Ndosaka ndichiwanzoshanya maraibhurari mazhinji, nheyo, nezvimwe. kwavanochengeta iwo manyuko asingakwanise kuwanikwa kubva kumba, uye kakawanda Ini ndinonyora ipapo ipapo. Kupfuura izvozvo ndine rombo rakanaka kuva nediki hofisi kumba, kunyangwe ndichifarira kunyora kunze, uye chero nguva mamiriro ekunze paanobvumidza, ndinotsvaga nzvimbo dzakanyarara kuti ndinakidzwe nemasikirwo ini ndichishanda.
ASS: Ini ndinoda rondedzero nezvazvinoreva, kupa chokwadi nezve Nhoroondo, uye Ndinonamata novel nekuti rinotibatsira kutiza kubva pachokwadi, dzimwe nguva zvisina kuchena, kutitakurira kuenda kune imwe nyika nenzira iripedyo. Asi zvimwe chete zvinoitika ne nhetembo, iyo yandinoda, kunyangwe munzira dzayo dzinoita sedzakareruka, senge nhetembo haiku, kunyangwe zvisiri zvechokwadi. Mhando dzese dzine chinangwa chadzo uye zvese zvakakosha.
ASS: Zvakanaka, kana ndiri akatendeseka, denda rakachinja hupenyu hwedu zvishoma, uye mukati memwedzi yekuvharirwa ndakave nenguva yakawanda yekuzvipira kutsvagisisa nekunyora, kupfuura zvandinowanzove nazvo, saka Ini ndatanga dzinoverengeka dzinoverengeka Ndinovimba vanoona mwenje munguva pfupi.
Gore rino ini ndichangoburitsa iyo biography yaFlavio Belisario, asi ndiri futi kudzorerazve dzimwe dzenyaya dzangu dzekutanga sezvo ivo vakangoburitswa mupepa vhezheni uye kuSpain, asi shamwari zhinji kubva kune dzimwe nyika hadzina kukwanisa kuzviwana, saka ndakazvipira kuti ndivandudze kuti ndizvipe zvakare mune yemagetsi vhezheni, kusanganisira mimwe mifananidzo, mepu nemifananidzo, pamwe nezvimwe zvemukati. Gore rino pachavewo ne rondedzero yakatsaurirwa kuna mambokadzi weEceni, iyo ngano Boudica, mukadzi wekutanga kusangana nevaRoma semutungamiri panhandare yehondo kuti asunungure Britain kubva mukukunda kweRoma.
Gore rinotevera iyo chikamu chechipiri chenhoroondo yakazara iyo yandakatsaurira kuNhoroondo yeCarthage, kubva panheyo dzayo kusvika pakuparadzwa kweguta mushure mechitatu Hondo yePunic, uye zvimwe Ensayo yakatsaurwa zvachose kune zviitiko zvinoitika munguva dzekare, kubva pane nyaya dzakapihwa neyekare zvinyorwa. Ini handisi kureva chete kune nyaya dzezvinyorwa zvengano kana maguta akarasika senge yakakurumbira Atlantis, asi zvakare kune nyaya dzevanoona, madhimoni, kuzvarwa patsva, werewolves, dzimba dzinotambudzwa, zvinhu uye kudzinga mweya, zvitsinga nehuroyi, zviitiko zvisinganzwisisike, nezvimwe. muGirisi yekare, Roma, uye Mesopotamia. Iyo yakazara compendium pane isingatsanangurike makare-kare.
Uye pakupedzisira, chinyorwa paBoudica chichava chekutanga pane akati wandei andafunga kutsaurira kune vakadzi vakuru vekare, saka zvichabuda imwe yakatsaurirwa kuna Mambokadzi Zenobia, Kumutungamiriri wengano weBerber uyo akatarisana nekufambira mberi kweIslam muMaghreb, inozivikanwa seKahina. Uye imwe yakatsaurirwa kune onna-bugeishas uye kunoichis, samurai uye shinobi vakadzi munhoroondo yeJapan., kuti vaivepo uye vakaita zvinoshamisa. Nenzira iyi ini ndinotarisira kuzokwanisa kugovera tsanga yangu yejecha kune ruzivo uye kukosha kwenyaya yechikadzi.
AL: Iwe unofunga kuti chiitiko chekutsikisa ndechei genre rakakosha senge zvinyorwa?
ASS: Mufananidzo wacho Yakasviba kwazvokunyangwe neimwe nzira yagara iri. Isu tiri mune yakatonyanya kuoma mamiriro kupfuura zvakajairwa, zvinova zvakawanda. Zvakaipisisa munyaya dzerondedzero, nekuti vaverengi venguva dzose vanowanzo tsvaga pamusoro pezvose nyaya dzinovabatsira kuva nenguva yakanaka uye kupukunyuka kubva kuhupenyu hwezuva nezuva, kunyanya kuburikidza nemanoveli. Kudzidzira kunodzikiswa kune vateereri kongiri chaiyo, kunyanya kufarira chidzidzo chebasa rega regaNaizvozvo, kukanganisa kwemabasa aya kwakaderera kwazvo.
Uye kana izvo zvisina kukwana, muSpain rondedzero zhinji dzenhoroondo dzinobata nedingindira rakafanana yatove kupfuura zvinozivikanwa, yakatsaurirwa kune dzimwe nguva dzakadai seMedical Wars kana vanhu vakakosha vakaita saCleopatra nekuti ivo vanovimba kuti vanozove nekugamuchirwa kukuru, kunyangwe mazana emabasa akatonyorwa nezvawo izvo izvo nhau dzinogona kupa zvishoma kana kusapa chinhu, nepo hapana munhu anonyora pamisoro isinganyanyi kuzivikanwa.
Nechikonzero ichocho uye pakupedzisira takaguma tichidudzira mabasa nevanyori vanozivikanwa vekunze achitarisira kuti mukurumbira wake uchabatsira kuwedzera basa racho, pachinzvimbo chekupa iwo mukana kune vanoshamisa vanyori vayo kuti zvimwe havazombove nemukana wekutumira. Zvinonyadzisa, chaizvo, uye zvinoita sekunge mamiriro acho ari kuzoita nani.
Ndosaka ndichifarira kuvimba nevaparidzi vakaita saHRM Ediciones kana La Esfera de los Libros, vasingatyi kutora danho iri uye nekunyatsoziva nzvimbo yekutsvagurudza kuSpain kuti vatange mabasa aya pasina kushandisa shanduro. Uye nekuda kweichi chikonzero ini handina kumira kubatana navo.
Muzhinji, iyo yekutsikisa nyika yakagara yakatarisana nenhamba dzakakurumbira, kunyangwe mukana wekushambadzira kwedesktop waunza mikana yakawanda kune vazhinji vanyori vekutanga. Nekudaro, dambudziko remakore mashoma apfuura, denda razvino nemaitiro enzanga maererano nekuverenga zvinoita kuti zvive zvakaoma kune vaparidzi vane mwero kana vanyori vazhinji kurarama, vasina kana mukana wekuita raramo kubva pamabasa avo.
Vazhinji vedu tinonyora kunakidzwa kukuru kwekuita kudaro uye, pamusoro pezvose, kugovana kana kudzidzisa, asi vashoma chete ndivo vanokwanisa kuzvipira kwazviri chete uye kuita raramo kubva mumabhuku. Kuti Belén Esteban atengesa mamwe mabhuku kupfuura anokunda weNobel saVargas Llosa anoti zvakawanda nezve izvi maitiro, uye vanhu vazhinji vanosarudza kusarudza zvisingaremi zvemukati zviri nyore uye zvinokurumidza kuwana kupfuura kutanga maawa nemaawa mubhuku.
Kukwidziridzwa kwetsika chidzidzo chakamirira, uye pamusoro pekusimudzira kweVanhu, nguva dzose vaituka kunyangwe pakati penhengo dzehurumende idzo, dai zvaive kwavari, dzaizodzvinyirirwa. Pasinei nezvose zvandinoda kuva netariro, uye pakatarisana nematambudziko panogara paine fungidziro yevanyori vazhinji vasingamire kunyora vasina kutarisira chero chinhu kudzoka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » dzakawanda » Arturo Sánchez Sanz. Kubvunzana nemunyori weBelisarius: Magister militum yeEastern Roman Empire